अमला | Our Dream City अमला – Our Dream City
अङ्ग्रेजी नाम: Gooseberry / Indian gooseberry
अमला चीन, ताइवान, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र दक्षिण-पूर्वी एसियाको रैथाने वनस्पति हो। यो नेपालमा उष्ण साथै १४०० मिटरसम्मको उपोष्ण क्षेत्रहरूमा पाइन्छ।
परिपक्वतामा उचाइ: यो १०-१५ मिटर सम्म अग्लो हुने मझौला आकारको पतझर वनस्पति हो। रूख अपेक्षाकृत ढिलो बढ्छ र सामान्यतया ६-८ वर्ष पछि मात्र फल फल्छ।
आकार: यस रूखमा हल्का हरियो प्वाँखदार पातहरू हुन्छन्। बोक्रा खरानी, चिल्लो र रूख बढ्दै जाँदा अस्थायी धब्बाहरू उप्किन्छन् । प्रायः बाङ्गो हुने काण्डको व्यास ३५ सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ।
फूल र फूल फुल्ने: फूल, एकलिङ्गी, हरियो-पहेँलो, पातको अक्षहरूमा बाक्लो झुप्पा फुल्छ। मार्च – अप्रिल सम्म फूल फुल्ने मौसम हो। फल गोलाकार, गुदीदार र बीज कडा आवरणले ढाकिएका हुन्छ।
खेती: वार्षिक दिनको तापक्रम २०-२९ डिग्री सेल्सियस हुने ठाउँहरूमा यो राम्रोसँग बढ्छ तर १४-३५ डिग्री सेल्सियससम्म सहन सक्छ । यसलाई १,५००-२,५०० मिमी औसत वार्षिक वर्षा चाहिन्छ र ७००-४,२०० मिमि वर्षा पनि सहन सक्छ।
माटो: अमला सजिलै हुर्काउन सकिने बिरुवा हो, धेरै सुख्खा भएका क्षेत्रहरू र धेरै अन्य फलफूल बालीहरूको लागि अत्यन्त कमसल माटोमा पनि फस्टाउने बताइन्छ। यसलाई पूर्ण घाम वा आंशिक छाया भएको स्थान चाहिन्छ तर राम्रोसँग निकास भएको अवस्था रहेसम्म माटोको आवश्यकता पर्दैन।
बीज राम्रोसँग भण्डारण गर्न मिल्दैन र त्यसैले यो पाक्ने बित्तिकै छर्नु राम्रो हुन्छ। बीज धेरै पाकेका फलहरूबाट लिइन्छ, जसलाई कडा आवरण हटाउनको लागि घाममा सुकाइन्छ, वा आवरणबाट आधा दायाँ काटिन्छ। निकालिएका बीजहरू अंकुरण परीक्षणको लागि पानीमा डुबाइन्छ र डुब्ने बीजहरू १००% अंकुरित हुनेछन्। ४ महिनामा बिरुवाको काण्डको व्यास ८ मिलिमिटर हुन्छ र आवश्यक भएमा अंकुरित वा कलमी गर्न सकिन्छ।
जवान रूखहरूको स्वस्थ मुनाको बीचको भागबाट सङ्कलन गरिएको परिपक्व नभएको कटिङ ३३ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा ब्याडमा रोपिएमा ८४% सम्मको उच्च प्रतिशत जरा उत्पादन गर्दछ। यो डाँठ काटेर, लेयरिङ र कलमीबाट पनि प्रसारण गर्न सकिन्छ। कम्तिमा १२ महिना जीवन क्षमतामा प्रति किलो ३४,००० बीज हुन्छन्।
बोक्रा, साथै जरा, पातहरू र काँचो फलहरू, ट्यानिन रसायनको स्रोतको रूपमा उच्च महत्व छ। ५ सेन्टिमिटरभन्दा कम व्यासको मुनाको बोक्रा राम्रो ट्यानिन प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। फल अचार बनाउन प्रयोग गरिन्छ र भिटामिन सी को सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक स्रोत हो।
हरियो मलको लागि काटिएका हाँगाहरू थप्दा अत्यधिक क्षारीय माटोलाई ठीक गर्छ भनिन्छ। रूख छिटो बढ्छ; घना, झार उम्रन नदिने वृक्षछत्रहरू उत्पादन गर्छ; र बीज फैलाउने वन्यजन्तु, विशेष गरी चराचुरुङ्गी र चमेराहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
Kunwar, R. M., & Bussmann, R. W. (2009). Medicinal plants and quantitative ethnomedicine:acase study from Baitadi and Darchula districts, far west Nepal. Journal of Natural History Museum, 24(1), 72-81.